Maamulka Puntland oo joojiyey inuu canshuurta ku qaado lacagaha Shilin Soomaaliga ha – Radio Daljir
Maajo 5, 2013 8:43 b 0
Garowe,05 May 2013 Maamulka Puntland ayaa joojiyey inuu canshuurta ku qaado lacagta Shilin Soomaaliga ah taas badalkeeda go?aansaday lacagta Dolarka ah.
Wasiira Maaliyada Puntland Farax CalI Jaamac oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee BBC ayaa sheegay inay dawladdu dhibaatooyin ku qabtey mudooyinkii danbe lacagta shilin Soomaaliga ah marka lagu qaado canshuuraha dawaldda,waxana uu intaas ku daray?in ay dib u dhacday lacag Shilin Soomaali ah taas oo ay keeni lahayd Dawladda dhexe ee Soomaaliya.
Dhinaca gacsatada magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso ayaa joojiyey in ay wax ku iibsadaan lacagta (500) boqol oo Shilin Soomaaliga ah taas oo mudooyinkii danbe sii dabar go?aysey.
Waxaa jira cabsi laga qabo lacagta shilin Soomaaliga ah oo yarraata taas oo keeni karta saamayn dhaqaale hadii aan la helin lacag? Shilin Soomali ah.
Caawa iyo Daljir, Axad, May 5, 2013, Cabdifataax Cumar Geeddi (Daljir Galkacyo)